Walmart milina fofona menaka manitra fantsom-bary China Manufacturer
Description:Walmart Fangaro menaka manitra,Walmart menaka fangaro menaka,Lavan'ny milentika diffuser Walmart
Home > Products > Wood Grain diffuser > Walmart milina fofona menaka manitra fantsom-bary
Walmart milina fofona menaka manitra fantsom-bary
Ny DT-1756 dia mpampita fanapariam-batana mahery vaika izay mamoaka tsikelikely ny hanitra ankafizinao. Ny teknolojia ultrasonika dia nanova ny rano nafangaro tamin'ny menaka tena izy ary lasa zary miafina ary manolotra azy ao amin'ny manodidina, rehefa mamokatra ions ratsy izay manampy ny fonao sy manamaivana ny adin-tsaina. Ny diffuser scent koa dia manampy amin'ny hamandoana sy hamelombelona ny kalitao rivotra iainanao. Fomba iray mora hanovana ny moana sy ny mahazatra ho toerana mampihetsi-po sy fialamboly.
Ny safidy azo arahin'asa fiara azo antoka dia mamela anao hankafy ny menaka manan-danja atahorany ary maimaimpoana, apetraho ho an'ny 1H / 3H / 6H ny fametrahanao mandritra ny 1H / 3H / 6H.
Tsindrio mora / Off amin'ny fanitsiana ny jiro fofona manitrao, faribolana ny jiroo na mametaka loko arak'izay tianao.
Ny fifehezana ny fanaparitahana hery manitsakitsaka hazo amin'ny haavo avo na ambany.
Ny diffuser fofona an-trano dia fanomezana tonga lafatra ho an'ny namana, mpampianatra na mpianakavy.
1. Azafady misafidy ny rano ilaina-miovaova rano Oiva ho an'ny traikefa tsara kokoa.
Fantsakanana Solika Fotsy any Amazon amin'ny fametrahana Timer Contact Now
Walmart Fangaro menaka manitra Walmart menaka fangaro menaka Lavan'ny milentika diffuser Walmart Fangaro menaka manitra Fangaro menaka manitra matevina Walmart Tena ilaina menaka Armaterapy Walmart Mini menaka Mini Fangaro menaka Mini